Ukurhafisa abaFaki abaFanelekileyo, abaXhasi - iTshayina lokuSebenzisa iFektri efanelekileyo
I-JK Chwetheza ikliphu yentsimbi
Umatshini wentsimbi osetyenziselwa ukubopha ucingo lwentsimbi. Ngenxa yokuba ucingo lwentsimbi lunzima, ukuvalwa kokugqibela akukho lula ukuba kwenziwe iqhina, ke ikhadi lentsimbi lisetyenziselwa ukubopha iqhina. Ngokutsho kobukhulu bentsimbi, imodeli ikhadi locingo lwentsimbi nalo lahlukile, ukuba kukho imfuneko, ngokobungakanani becingo lensimbi ukuthenga imodeli efunekayo. Ikliphu yocingo lwentsimbi ilungele uqhagamshelo locingo lobhedu kunye nocingo lwealuminiyam kunye nentambo yocingo lwentsimbi kwisixhobo sokulinganisa amandla ombane. Kuyinto pl ...
I-Hardware luhlu olubanzi lweenjongo ezahlukeneyo, umzekelo, ukufaka iingcingo ngeefowuni zecingo ezahlukeneyo, ukwakheka kwentambo yokwambathisa iringi, ukudibanisa iingcingo zoxinzelelo olwahlukeneyo, ityhubhu, ukugqiba ukuhambisa umqhubi kwiintlobo ezahlukeneyo zebar yokuphumla, njl. , kunye nenqaba enazo zonke iintlobo zocingo, kunye nokunxulumene nobungakanani bomqhubi wenqanawa osetyenziselwa ukukhusela, kufuneka basebenzisane. Inxulumene nokhuseleko locingo okanye inqaba, nokuba ngowuphi umonakalo, ...
Amandla ombane afakela izinto zokubopha ihexagon iintloko zebhloko kunye nomngxunya wepini owahlulwe esinqeni
Bimetal uqinisa parallel groove uqinisa ezithile kunye usambathisa (1KV, 10KV, 20KV)
● Isicelo seJB, JBL, JBT, JBTL uthotho lwesakhelo esimise okwexeshana sifanelwe unxibelelwano olungathwaliyo kunye nesebe labaqhubi kwimigca ephezulu. Isetyenziswa njengokugquma ukhuselo nesimbozo sokugquma. ● Ulwakhiwo 1. Khetha anti-igcwala aluminiyamu izinto ingxubevange 2. Amalungu adityaniswe kunye ngaphandle kokuwa ngexesha lofakelo 3. I-arc setyhula ibanjwe ngokuqinileyo kwindawo enkulu, kwaye umqhubi akulula ukuhamba… ukusebenza kwe-insulation .. .
Izixhobo zekhebula ezineentsimbi zentloko yokucheba
1. Isishwankathelo seMveliso Igama lomkhiqizo: Iitotali zeTorque series Uluhlu lwe-BLMT） Indlela yokumelwa komfuziselo we-BLMT- □ END_LINK / □ - - kwizixhobo, ezisetyenziselwa ikakhulu ukuqhagamshela iingcingo ezingagqunywanga, iicingo zealuminium, iingcingo zealuminium, iingcingo zentsimbi kunye neengcingo zobhedu kwiindawo ezingathwaliyo. 3. Ububanzi besicelo Umgca osetyenziswayo osebenzayo: 25-240㎜². Ipharamitha yezoBugcisa ...